China zvachose magineti zvinhu indasitiri inoita basa rinokosha munyika. Iko hakuna kwete chete mabhizinesi mazhinji ari kuita mukugadzira uye kunyorera, asi zvakare basa rekutsvagisa rave riri mudenga. Permanent magineti zvinhu zvinonyanya kuve zvakakamurwa zvisingawanzoitika pasi magineti, simbi yekugara magineti, rinoumbwa risingaperi magineti uye ferrite zvachose magineti. Pakati pavo, isingawanzike pasi Neodymium magineti inoshandiswa zvakanyanya uye inokurumidza kugadzira magineti chigadzirwa.
1. China inotora mukana wepasina kujairika pasi Neodymium zvachose magineti zvinhu.
China ndiyo inogadzira zvicherwa zvisingawanzoitika pasi rose, inoverenga 62.9% yezvinhu zvisingawanzo zvicherwa zvepasi mu2019, ichiteverwa neUnited States neAustralia, ichiverengera 12.4% uye 10% zvichiteerana. Nekuda kwekushomeka kwenzvimbo dzakachengetedzwa, China rave iro guru repasi rese rekugadzira uye rekutengesera hwaro hweasingawanzo magineti epasi. Zvinoenderana nehuwandu hweChina Rare Earth Industry Association, muna 2018, China yakaburitsa matani 138000 emaNeodymium magineti, achiverengera 87% yezvakabuda pasi rose, zvakapetwa kagumi pane iyo yeJapan, yechipiri pakukura pasirese.
2. Rare Earth Neodymium magineti anoshandiswa zvakanyanya pasi.
Kubva pakuona kweminda yekushandisa, yakaderera-magumo Neodymium magineti anonyanya kushandiswa mune magnetic adsorption, kupatsanura kwemagineti, bhasikoro remagetsi, mukwende bhegi, musuo bhureti, matoyi uye mimwe minda, nepo yepamusoro-yekuita Neodymium magineti inonyanya kushandiswa mumhando dzakasiyana dzemagetsi. mota, kusanganisira simba-rinoponesa mota, mota mota, simba remhepo kugadzira, epamberi ekuteerera-ekuona michina, erevheta mota, nezvimwe.
3. China isingawanzike pasi Neodymium zvinhu zviri kuwedzera zvakatsiga.
Kubva 2000, China yakave mugadziri mukuru wepasirese wepasi pasingaverengeke magetsi eNeodymium. With kukura pemvura mafomu, goho NdFeB magineti zvinhu mu China kwave kukura nokukurumidza. Zvinoenderana nedatha reChina Rare Earth Industry Association muna 2019, zvakaburitswa sintered Neodymium blanks yaive 170000 matani, achiverengera 94.3% yezvose zvakabuditswa zveNeodymium magineti zvigadzirwa mugore iro, zvakasungwa NdFeB yaive ne4.4%, uye zvimwe zvabuda zvese. yaive ne1.3% chete.
4. China yeNeodymium magineti kugadzirwa inotarisirwa kuramba ichisimuka.
Global pasi rwizi kudyiwa NdFeB iri vakagovana injini indasitiri, bhazi uye njanji, akangwara robhoti, mhepo simba chizvarwa uye itsva simba motokari. Chiyero chekukura kwemaindasitiri ari pamusoro mumakore mashanu anotevera ese anopfuura 10%, izvo zvinotungamira mukuwedzera kwekugadzirwa kweNeodymium kuChina. Inofungidzirwa kuti kuburitswa kweNeodymium magineti kuChina kuchachengetedza huwandu hwekukura kwe6% mumakore mashanu anotevera, uye inodarika matani 260000 na2025.
5. Kudiwa kwekukwirira kwakanyanya zvisingaite pasi magineti zvinhu zvinotarisirwa kukura.
Yakakwira mashandiro isingawanzo magineti epasi anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakaderera-kabhoni hupfumi minda, senge yekuchengetedza simba-uye inodzivirira nharaunda indasitiri yekugadzira. Sezvo nyika dzakatenderedza pasirese dzinoisa mari yakawanda mune yakaderera-kabhoni, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza indasitiri yekugadzira uye kusimudzira zvigadzirwa zvakasvibirira, nyika dzinoisa mari zvakanyanya mune yakaderera-kabhoni, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza indasitiri yekugadzira nekusimudzira zvigadzirwa zvakasvibira Nekukurumidza kukurumidza kwe maindasitiri ari kubuda akadai semotokari nyowani emagetsi, marobhoti emagetsi ekugadzira magetsi uye kugadzira kwakanaka, kudiwa kwemagineti epasi rese anoshanda-mashoma magineti anotarisirwa kukura. Nekukurumidza kukurumidza kwemaindasitiri ari kubuda, kudiwa kwepamusoro-kuita kusingawanzo pasi magineti zvinhu zvinotarisirwa kukura.